Inqubomgomo yobumfihlo - World Tourism Portal
World Tourism Portal Inqubomgomo yobumfihlo
World Tourism Portal Kunomkhawulo ("thina", "thina", noma "yethu") kusebenza iwebhusayithi ye-https: //worldtourismportal.com (the "Service").
Leli khasi likukwazisa ngezinqubomgomo zethu mayelana nokuqoqwa, ukusetshenziswa, nokudalulwa kwedatha yomuntu siqu uma usebenzisa isevisi yethu kanye nezinqumo ozihlobanise nale datha.
Sisebenzisa imininingwane yakho ukuhlinzeka insiza. Ngokusebenzisa insizakalo, uyavuma ukuqoqwa nokusetshenziswa kolwazi ngokuya ngale nqubomgomo. Ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye inqubomgomo Yobumfihlo, amagama asetshenziswe kule Nqubomgomo Yobumfihlo anezincazelo ezifanayo nezethu Imibandela.
Idatha yomuntu siqu kusho idatha emayelana nomuntu ophilayo ongaziwa kusuka kulawo datha (noma kulawo kanye nolunye ulwazi olukhona noma olungahle lufike kithi).
Idatha yokusetshenziswa idatha eqoqwe ngokuzenzekelayo noma eyenziwe ukusetshenziswa kweNsizakalo noma kusukela kwingqalasizinda yeSevisi ngokwayo (isibonelo, isikhathi sokuvakashelwa kwekhasi).
Amakhukhi izingcezu ezincane zedatha egcinwe kudivayisi yomsebenzisi.
Isilawuli sedatha sisho umuntu (yedwa noma ohlangene noma ofanayo nabanye abantu) onquma izinhloso nokuthi iyiphi idatha yomuntu siqu okufanele icutshungulwe. Ngenhloso yale Nqubomgomo Yobumfihlo, singabalawuli bedatha yakho.
Iprosesa yedatha (noma abahlinzeki Bezinsizakalo)
Iprosesa yedatha (noma i-Service Provider) isho noma yimuphi umuntu (ngaphandle kwesisebenzi soMlawuli weDatha) osebenza imininingwane egameni loMlawuli wedatha.
Singasebenzisa izinsizakalo zabanikezeli bezinsizakalo ezihlukahlukene ukuze sikwazi ukucubungula idatha yakho ngempumelelo.
Isihloko sedatha yinoma yimuphi umuntu ophilayo oyisihloko sedatha yomuntu siqu.
Umsebenzisi umuntu osebenzisa Insiza yethu. Umsebenzisi uhambelana nesihloko sedatha, okuyihloko yemininingwane yomuntu uqobo.
Siqoqa izinhlobo ezahlukene zemininingwane ngezinhloso ezehlukene ukuhlinzeka nokuthuthukisa isevisi yethu kuwe.
Izinhlobo Zedatha Eqoqwe Idatha Yomuntu
Ngenkathi sisebenzisa Insizakalo yethu, singakucela ukuthi usinikeze imininingwane ethile ebonakalayo engasetshenziswa ukuxhumana nathi noma ukukuhlonza (“Imininingwane Yakho”). Imininingwane engabonakala kuwe ingahle ifake, kepha ayikhawulelwe ku: Ikheli le-imeyili - Igama Lokuqala negama lokugcina - Inombolo yocingo
Amakhukhi kanye nedatha yokusetshenziswa
Singasebenzisa i-Datha Yakho Siqu ukuxhumana nawe ngezincwadi zezindaba, ukumaketha noma izinsimbi zokuphromotha nolunye ulwazi olungaba nentshisekelo kuwe ngokubuka kwesifiso sebhizinisi elisemthethweni. Ungahle ukhethe ukuphuma ekutholeni noma yikuphi, noma konke, kwalemininingwane evela kithi ngokulandela isixhumanisi esingavunyelwe noma imiyalo enikezwe kunoma iyiphi i-imeyili esiyithumelayo.
Singase futhi siqoqe ulwazi ukuthi isevisi ifinyelelwe futhi isetshenziswe kanjani ("Idatha yokusetshenziswa"). Le Data Yokusebenzisa ingafaka ulwazi olufana nekheli le-Intanethi ye-Intanethi yekhompuyutha (isib. Ikheli le-IP), uhlobo lwesiphequluli, inguqulo yesiphequluli, amakhasi eSevisi yethu owavakashelayo, isikhathi nosuku lokuvakashelwa kwakho, isikhathi esichithwa kulawo makhasi, okuyingqayizivele izihlonzi zedivayisi kanye neminye imininingwane yokuxilonga.
I-Tracking & Cookies Idatha
Sisebenzisa amakhukhi kanye nobuchwepheshe obufanayo bokulandelela ukulandelela umsebenzi ku-Service yethu futhi sibambe ulwazi oluthile.
Amakhukhi amafayela anezinombolo ezincane zedatha ezingabandakanya isihlonzi esiyingqayizivele esingaziwa. Amakhukhi athunyelwa kusiphequluli sakho kusuka kuwebhusayithi futhi agcinwe kudivayisi yakho. Ubuchwepheshe bokulandelela bubuye busetshenziswe ama-beacons, amathegi, nezikripthi zokuqoqa nokulandelela ulwazi nokuthuthukisa nokuhlaziya isevisi yethu.
Ungafundisa isiphequluli sakho ukuba senqabe wonke amakhukhi noma ukukhombisa uma ikhukhi ithunyelwa. Noma kunjalo, uma ungamukeli amakhukhi, ngeke ukwazi ukusebenzisa izingxenye ezithile zeNsizakalo yethu.
World Tourism Portal isebenzisa idatha eqoqwe ngezinhloso ezehlukene:
Ukuhlinzeka nokugcina isevisi yethu
Ukukwazisa mayelana nezinguquko ku-Isevisi yethu
Ukukuvumela ukuba uhlanganyele kuzici ezisebenzayo zesevisi yethu uma ukhetha ukwenza kanjalo
Ukuhlinzeka ukusekelwa kwamakhasimende
Ukuqoqa ukuhlaziywa noma ulwazi olubalulekile ukuze sikwazi ukuthuthukisa isevisi yethu
Ukuqapha ukusetshenziswa kweNsizakalo yethu
Ukuthola, ukuvimbela nokubhekana nezindaba zobuchwepheshe
Ukuhlinzeka ngezindaba, okunikezwayo okukhethekile kanye nemininingwane ejwayelekile mayelana nezinye izimpahla, izinsiza kanye nemicimbi esikunikezayo efana naleyo osuvele uyithengile noma ubuzile ngayo ngaphandle kokuthi ukhethe ukungatholi lolo lwazi
World Tourism Portal izogcina i-Datha Yakho Siqu kuphela uma kunesidingo ngezinhloso ezibekwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo. Sizogcina futhi sisebenzise i-Datha Yakho ukuze sifinyelele kuzibopho zethu zomthetho (ngokwesibonelo, uma kudingeka ukuthi sigcine idatha yakho ukuze ihambisane nemithetho esebenzayo), sixazulule izingxabano, futhi sisebenzise izivumelwano nezinqubomgomo zethu.
World Tourism Portal futhi izogcina idatha yokusetshenziswa ngezinjongo zokuhlaziywa kwangaphakathi. Idatha yokusetshenziswa ngokuvamile igcinwa isikhathi esifushane, ngaphandle kokuthi le datha isetshenziselwa ukuqinisa ukuphepha noma ukuthuthukisa ukusebenza kwensizakalo yethu, noma sibophezelwe ngokomthetho ukugcina le datha isikhathi eside.
Imininingwane yakho, kufaka phakathi idatha yomuntu siqu, ingadluliselwa - futhi igcinwe kuma-computer ahlala ngaphandle kwesifundazwe sakho, isifundazwe, izwe noma ezinye iziphathimandla zikahulumeni lapho imithetho yokuvikelwa kwedatha ingahluka kunelabo abasuka enkambeni yakho.
Imvume yakho kule Nqubomgomo Yobumfihlo elandelwa ukuhambisa kwakho kwaziswa okunjalo imelela isivumelwano sakho kulokho kudluliselwa.
World Tourism Portal kuzothatha zonke izinyathelo ezidingekayo ukuqinisekisa ukuthi idatha yakho iphatheka ngokuphepha futhi ngokuhambisana nale Nqubomgomo Yobumfihlo futhi akukho ukudluliswa kwedatha yakho yomuntu siqu kuzokwenzeka enhlanganweni noma ezweni ngaphandle uma kukhona ukulawula okwanele endaweni okufaka nokuphepha kwedatha yakho kanye nolunye ulwazi lomuntu siqu.
Ukudalula Ukuqiniswa Komthetho
Ngaphansi kwezimo ezithile, World Tourism Portal kungadingeka ukuthi uveze imininingwane yakho uma idingeka ukwenza lokho ngomthetho noma ukuphendula izicelo ezivumelekile eziphathimandla zikahulumeni (isib. inkantolo noma i-ejensi kahulumeni).
World Tourism Portal ingadalula iDatha Yakho Ngokwethemba elihle lokuthi isenzo esinjalo siyadingeka:
Ukuhambisana nesibopho somthetho
Ukuvikela nokuvikela amalungelo noma impahla yeBlackhawk Intelligence Limited
Ukuvimbela noma ukuphenya okungalungile okwenzekayo mayelana neNsizakalo
Ukuvikela ukuphepha komuntu siqu kwabasebenzisi be-Service noma umphakathi
Ukuvikela ekuphikisweni komthetho
Ukulondeka kwedatha yakho kubalulekile kithi, kodwa khumbula ukuthi ayikho indlela yokudlulisela phezu kwe-inthanethi, noma indlela yokugcina i-electronic i-100% ivikelekile. Njengoba silwela ukusebenzisa izindlela ezamukelekayo ezentengiselwano ukuvikela idatha yakho yomuntu siqu, asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha kwayo ngokuphelele.
World Tourism Portal ihlose ukuthatha izinyathelo ezinengqondo zokukuvumela ukulungisa, ukuguqula, ukusula, noma ukukhawula ukusetshenziswa kweDatha yakho.
Uma ufisa ukwaziswa ngeDatha yomuntu siqu esiyiphathe ngawe futhi uma ufuna ukuthi isuswe ezinhlelweni zethu, sicela uxhumane nathi. Ezimweni ezithile, unelungelo:
Ukungena nokwamukela ikhophi Yemininingwane Yakho Siqondene nawe
Ukulungisa noma iyiphi i-Datha Yomuntu egcinwe ngawe engalungile. Ukucela ukususwa kweDatha yomuntu siqu ephethwe ngawe
Unelungelo lokufinyeleleka kwedatha ngemininingwane oyinikeza World Tourism Portal. Ungacela ukuthola ikhophi yedatha yakho uqobo ngendlela evame ukusetshenziswa ngogesi ukuze ukwazi ukuyiphatha futhi uyihambise.
Sicela wazi ukuthi singakucela ukuthi uqinisekise ubunikazi bakho ngaphambi kokuphendula izicelo ezinjalo.
Singasebenzisa izinkampani zangaphandle kanye nabantu ngabanye ukusiza isevisi yethu ("Abanikezeli Basevisi"), ukuhlinzeka ngeNsizakalo, ukwenza izinsizakalo ezihlobene nezinsizakalo noma ukusiza ekuhlaziyeni ukuthi isevisi yethu isetshenziswa kanjani.
Lawa maqembu wesithathu afinyelela kuDatha yakho Yomuntu kuphela ukuze enze le misebenzi egameni lethu futhi anesibopho sokungawudalula noma awisebenzise nganoma iyiphi enye injongo.
Singasebenzisa Abanikezeli Besevisi Yenkampani yangaphandle ukuhlola nokuhlaziya ukusetshenziswa kweNsizakalo yethu.
I-Google Analytics isevisi ye-analytics yewebhu enikezwa yi-Google elandelela futhi ebika traffic webhusayithi. I-Google isebenzisa idatha eqoqwe ukulandelela nokuqapha ukusebenzisa isevisi yethu. Le datha yabelwe namanye amasevisi we-Google. I-Google ingasebenzisa idatha eqoqwe ukuze ixhumane futhi ihambise izikhangiso zenethiwekhi yayo yokukhangisa.
Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana nemikhuba yobumfihlo ye-Google, sicela uvakashele ikhasi lewebhu le-Google / Imigomo Yobumfihlo: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Ukumaketha kabusha kokuziphatha
World Tourism Portal isebenzisa izinsizakalo zokumaketha kabusha ukukhangisa kuwebhusayithi yomuntu wesithathu kuwe ngemuva kokuvakashela Insiza yethu. Mina nabathengisi bethu beqembu lesithathu sisebenzisa amakhukhi ukwazisa, ukukhulisa nokwenza izikhangiso zisuselwe ekuvakasheleni kwakho kwangaphambilini kwensizakalo yethu.
Isevisi yokumaketha kabusha ye-Google AdWords inikezwa yi-Google Inc.
Ungakhetha ukuphuma kwe-Google Analytics ukuze ubonise ukukhangisa futhi wenze ngezifiso izikhangisi ze-Google Display Network ngokuvakashela ikhasi lezilungiselelo lezikhangiso ze-Google: https://adssettings.google.com/authenticated . I-Google futhi incoma ukufaka isengezo se-Google Analytics Opt-Out Browser sesiphequluli sakho sewebhu. Isengezo sokuphuma kwesiphequluli se-Google Analytics sinikeza izivakashi amandla okuvimba idatha yazo ukuthi iqoqwe futhi isetshenziswe i-Google Analytics. Ngemininingwane engaphezulu ngemikhuba yobumfihlo ye-Google, sicela uvakashele ikhasi lewebhu le-Google Ubumfihlo Nemigomo: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Isevisi yokumaketha nge-Twitter inikezwa yi-Twitter Inc.
Ungaphuma ezikhangisweni ezisuselwa ku-Twitter ngokulandela imiyalo yazo: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads . Ungafunda kabanzi ngezenzo zobumfihlo nezinqubomgomo ze-Twitter ngokuvakashela ikhasi Lazo Lobumfihlo: https://twitter.com/en/privacy
Insizakalo yokumaketha kabusha i-Facebook inikezwa yi-Facebook Inc. Ungafunda kabanzi ngokukhangisa okusekwe kuntshisakalo kusuka ku-Facebook ngokuvakashela leli khasi: https://www.facebook.com/help/164968693837950
Ukuze ukhethe ukuphuma ezikhangisweni ezisekelwe ezithakazelweni zika-Facebook landela le miyalo kusuka ku-Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 . Ngeminye imininingwane ngemikhuba yobumfihlo ye-Facebook, sicela uvakashele inqubomgomo yedatha ye-Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Izixhumanisi Kwamanye Amasayithi
Isevisi yethu ingaqukatha izixhumanisi kwezinye izingosi ezingasetshenziswa yizo. Uma uchofoza isixhumanisi sesithathu, uzoqondiswa kusayithi lomuntu wesithathu. Sikukwazisa ngokuqinile ukuthi ubuyekeze Inqubomgomo Yobumfihlo kuyo yonke indawo oyivakashelayo.
Asikwazi ukulawula futhi singacabangi mthwalo wokuqukethwe, izinqubomgomo zobumfihlo noma imikhuba yezinkampani zesithathu noma amasevisi.
Insizakalo yethu ayikhulumi nanoma ngubani ongaphansi kweminyaka ye-18 ("Izingane"). Asazi siqoqe imininingwane ekhonjwa ngumuntu uqobo kusuka kunoma ngubani ongaphansi kweminyaka ye-18. Uma ungumzali noma umnakekeli futhi uyazi ukuthi izingane zakho zisinikeze iDatha yomuntu siqu, sicela uxhumane nathi. Uma sazi ukuthi siqoqe imininingwane yomuntu siqu kusuka ezinganeni ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yabazali, sithatha izinyathelo zokususa lolo lwazi kusukela kumaseva ethu.
Singavuselela inqubomgomo yethu yobumfihlo ngezikhathi ezithile. Sizokwazisa nganoma yiluphi ushintsho ngokuthumela inqubomgomo entsha Yobumfihlo kuleli khasi. Uyelulekwa ukuthi ubukeze le Nqubomgomo Yobumfihlo ngezikhathi ezithile nganoma yiziphi izinguquko.
Izinguquko kule Nqubomgomo Yobumfihlo ziyasebenza lapho zifakwa kuleli khasi.
Uma unemibuzo mayelana nale Nqubomgomo Yobumfihlo, sicela uxhumane nathi nge-imeyili ku: